Uboshiwe ‘ogwaze’ intombi yomyeni | IOL Isolezwe
Uboshiwe ‘ogwaze’ intombi yomyeni
Isolezwe / 19 November 2012, 1:38pm /
UBOSHWE eqeda ukuphuma ngomnyango wasesontweni umkamfundisi ogwaze walimaza intombazane abeyisola ngokuthandana nomyeni wakhe webandla iFull Gospel Church eseMbali, e-Unit 2, eMgungundlovu.
Uboshwe izolo emva kokuthi intombazane ihambile yayovula icala ngoLwesihlanu icindezelwa wumndeni wayo.
Isolezwe NgoMgqibelo libike ngodaba lukamkamfundisi okuthiwa ngemuva kokuthi umyeni wakhe engalalanga ekhaya uhambe waya kulo wesifazane abasonta naye wafika wamgwaza amanxeba amabili ekhanda.
Okhulumela amaphoyisa, uLieutenant Colonel Vincent Mdunge, uthe basazolubheka lolu daba usacela intatheli iphinde ibuyele kuye kodwa ukuhamba kwesikhathi ucingo lwakhe beselukhala lungabanjwa.
Umthombo osondelene nomkamfundisi uthe uboshwe ngesikhathi kuphela inkonzo ngoba icala bese livuliwe. amaphoyisa amlinde ngaphandle kwesango.
“Ngikhuluma nawe nje usesiteshini samaphoyisa. Bebekhona bobabili nomfundisi kusanda kuphuma isonto kodwa abakubo kwantombazane bebengekho. Bathe sebeyayeka ukusonta ebandleni emva kwalesi sigameko,” kusho yena.
Uthe bakufanisa nehlazo okwenziwe ngumkamfundisi okuthiwa akaqali ukulwa. ezinyangeni ezintathu ezidlule kuthiwa walwa nenye ingane esikoleni sakhe bebanga isoka, hhayi umfundisi.
Kuthiwa umkamfundisi ube nesiqiniseko sokuthi bayathandana ngokuthi ngeledlule abone imiqhafazo evela kowesifazane wasenkonzweni kwiselula yomyeni wakhe efakazela ukuthi bebelele ehhotela iRegal Inn elibude buduze nomuzi wabo.
Umthombo uthe ngesonto eledlule umkamfundisi ufike enkonzweni wakhipha lo wesifazane isonto lisanda kuqala umfundisi eqeda kuthandaza.
“Ulicele kahle leli volontiya ukuthi limphelezele khona into afuna ukuyoyilanda ekhaya. Sebefikile ekhaya uqale ngokuthi akhiye isango nomnyango maqede wangena ekamelweni lokulala, wakhumula isiketi wagqoka ama-leggings,” kusho lo mthombo.
Uqhube wathi lo wesifazane ungene endlini kuqoqwe kwabekwa ndawonye ummese, iphini lokubonda uphuthu, insimbi ende nesikele.
Kuthiwa umama umfundisi uqale wanquma ama-dreadlocks alo wesifazane ngoba ethi enziwe ngemali yakhe nokuthe eqeda wahosha iphini wamshaya emphoqa ukuba avume ukuthi uthandana nomyeni wakhe futhi ubelele naye ehhotela iRegal Inn.
“Lize laphuka iphini lilokhu liphika ivolontiya. Usuke lapho wadonsa insimbi, wagalela ngayo kuye kodwa walokhu eqhubekile nokuphika. Ube esedonsa ummese wamgwaza ngawo ekhanda amanxeba amabili. Ugwazekile nasezingalweni abelokhu evika ngazo wagcina ngokuthi awe phansi kodwa waqhubeka wamgwaza nasezinyaweni,” kusho lo mthombo.